Scott Croyle. Chinyorwa chitsva cheApple cheBeats | Ndinobva mac
Kana isu taifunga kuti Apple yafunga kupedza hukama hwayo neBeats nekuda kwekutanga kweAirPods Max uye nekuda kwezvaitarisirwa zvekutanga mhando nyowani dzakadzokororwa dzeAirPods mune ramangwana, taive takakanganisa zvikuru. Beats ichiri kukosha zvakanyanya yekambani uye hazvishamise, nekuti mahedhifoni ane mhando yakawanda uye vanotengesa chaizvo. Muchokwadi ivo vanoda kuisimbisa uye saka vakashandira Scott Croyle semugadziri mutsva wezvigadzirwa.
Scott croyle Iye aive mugadziri wezvizhinji zveHTC zvigadzirwa, muchokwadi iye anozivikanwa nezita remadunhurirwa reHTC raJony Ive. Aive nebasa rekugadzirwa kweiyo HTC One M7 uye M8. Mumwe munhu Apple akabhadhara gore rapfuura kuti ape Beats mumhanzi uye odhiyo kukurudzira kutsva. Izvi zvinoreva here izvozvoAmoni haichazovipo?. Kwete. Chaizvoizvo kubatana pakati pemusoro mutsva wedhizaina nekambani yanga ichishanda pane zvigadzirwa kusvika parizvino ichaenderera uye neimwe nzira iri padhuze.
Hapana chigadzirwa chakatangwa nezviratidzo zveScott, asi kana kondirakiti iyi yakatangwa zvino mumushumo wakapihwa naApple, imhaka yekuti tingave takatarisana nekuratidzwa kuri pedyo kwezvigadzirwa zvitsva zvechikamu uye tatova nechisimbiso che Jony Ive anobva kuHTC. Muchokwadi kune runyerekupe rwekuti isu tinogona kutomboona makeover yeanorova piritsi + vatauri vanodzokera kumashure kuna 2015. Inenge iri nhau yakanaka kwazvo kune vashandisi. Iyo yakawanda hwakawanda sarudzo dzatinadzo, zvirinani, hongu.
Tinofanira kuziva kune izvo zvitsva zvinoburitswa uye uone kana ivo vakatakura zvechokwadi iyi nyowani dhizaini chiratidzo icho chichava chiratidzo chitsva cheBeats.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Scott Croyle. Apple nyowani kusaina kweBeats